Ejipta : 18 Aprily, Andro Iadiana Amin’ny Sotasota Atao Amin’ny Vehivavy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Jona 2017 11:31 GMT
( Fanamarihana : lahatsoratra nivoaka tamin'ny Aprily 2009 )
Manomboka mitombo tsikelikely ny fanentanana an-tserasera ao amin'ny Facebook izay miantso amin'ny fanaovana hetsika am-pilaminana ny 18 aprily hiadiana amin'ny herisetra atao amin'ny vehivavy sy zazavavy any Ejipta. Ilay fitakiana, izay mangataka ny mba hahafahan'ireo vehivavy ejiptianina mivezivezy am-pilaminana ao amin'ny fireneny, dia nateraky ny famotsorana ny iray tamin'ireo nanao herisetra tamin'i Asser Yasser.
Ao amin'ny blaoginy ihany, manoritsoritra [amin'ny teny arabo] [ amin'ny fomba tsy manondro olona] ny zavatra nahazo azy i Asser:
Asser Yasser, vehivavy iray ejiptianina mpitoraka bilaogy, dia vao no nipetraka miaraka amin'ny fianakaviany eny amin'ny manodidina an'i Mokattam. Teny am-podiana ho any an-tranony, mifanena tamin'ny vondrona adolantsento iray ao anaty fiara mijanona izay hivoahan'ny fofona mahery be ana ”hash” (rongony) izy. Maniratsira azy ireto farany, manaraka azy, miezaka ny misambotra azy ary mihodidina azy amin'ny fiarany. Nahatsiaro ho voafandrika ilay vehivavy mampalahelo izay niaraka tamin'ny zanaky ny mpiray tampo aminy. Olona maro no nanatrika avy any an-davarangany ny zava-niseho fa tsy nisy na iray aza namonjy azy. Na izany aza, na dia eo ny tahotra, nahavita niantso ny polisy tamin'ny findainy izy ary haingana dia tonga namonjy azy i Mohab, mpiasan'ny polisy. Saika nanitsaka an'i Asser ny iray tamin'ny fiaran'ireo mpanao herisetra. Ny iray tamin'ireo tanora nijanona teny an-toerana nilaza fa nanatri-maso tao anatin'ny fiarany ilay fanaovana herisetra izy, fa tsy nandray anjara. Mamaritra azy ho iray tamin'ireo mpanao herisetra i Asser ary miaraka mankany amin'ny biraon'ny polisy daholo izy ireo mametraka fanambaràna.
Navotsotra ilay mpanao herisetra, 19 taona, saingy manapa-kevitra ny tsy hanaiky ho resy i Asser, manoratra i Mohamed Hamdy :
Nilaza i Asser : ”Taorian'ny famotsorana ilay mpanao herisetra tamiko, nahatsapa aho fa tsy tomombana ny lalàna ary ny fanantenana tokana hany ananantsika dia ny hampifidy lalàna iray manohitra ny fanaovana sotrasota; tokony hahatsiaro tena ny mpikambana ao amin'ny parlemanta ejiptianina fa antso niraisan'ireo vehivavy Ejiptianina rehetra sy ireo mpiray tanindrazana mendrikaja aminy izany.
Ao anatin'ireo teny faneva natolotra ho an'ity hetsika fanentanana ity, dia misy :
Tsy hanary ny zoko aho, izaho no lasibatra, fa tsy ilay nanao herisetra.
Haingana tamin'ny fanatevenana laharana an'ilay hetsika ireo mpitoraka blaogy :
Manome soso-kevitra i River Nael [amin'ny teny anglisy] ny ”hanamarihanaa” ireo mpanao herisetra amin'ny alalan'ny fitomboka mba ahafahana mamantatra azy sy hanomezana henatra azy ireny.
Rehefa voalaza izany, ary manoloana ny fiakaran'ny isan'ireo tranganà herisetra ara-nofo ao amin'ny fiarahamonina ejiptianina, afaka manoro hevitra fanafody izay mandray ho zava-dehibe ny lanjan'ny endrika eo anivon'ny fiarahamonina. […] Afaka atao ny fanamarihana ireo mpanao herisetra amin'ny ranomainty eo amin'ny tarehiny izay tsy hamela marika maharitra izany, toy ilay ampiasaina mandritra ny fifidianana, rehefa mandona ny rantsan-tanany ao anatin'ny ranomainty ireo efa nifidy mba hisorohana ny hosoka. Mety ho hita mandritra ny andro maromaro na herinandro ity marika ity arakaraky ny fanamelohana (sy ny fivoarana ara-teknika). Toa afaka atao ny fanamboarana ranomainty be dia be toa izany amin'ny vidiny mirary.
Mba hisorohana ny fijerin'ny mpifanolobodirindrina, mpiaramiasa, fianakaviana sy ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny, azo antoka fa hisafidy ny hijanona any an-tranony ireo mpanao herisetra voamarika toa izany. Mety tena hampiova hevitra izany.
Hatramin'ny 25 Novambra 2005, 573 no mpikambana tao amin'ilay vondrona Facebook.